.: Ko Moe's Electronics Notes :.: July 2008
EZ-Digital OS-310M Portable Oscilloscope
ကျွန်တော်အခုသုံးနေတဲ့ Oscilloscope လေးပါ။ အရင်တစ်ခါရေးခဲ့တဲ့ Techtronik Oscilloscope နဲ့ သဘောတရားခြင်း တူပါတယ်။ Techtronik ကတော့ function ပိုများ၊ ပိုမြင့်တာပေါ့။ ဒါလေးကတော့ Compact ဖြစ်တယ်။ Battery ပါတဲ့အတွက် external power မလိုတော့ portable ဖြစ်တာပေါ့။ အောက်မှာ သူ့ရဲ့ features တွေကို ရေးပေးထားပါတယ်။
- 100 MHz Band width
- Two channels and dual digitizers
- Built-in 3-3/4 (4,000 counts) digital multimeter with auto or manual range
- Extra bright backlit LCD display
- Automatic optimized panel setting and tracking according to input signal
- RS-232C Programmability/Communication
- Rechargeable Ni-Cd battery and external AC adapter
- Direct hardcopy through RS-232C
Posted by ကိုမိုး at Monday, July 21, 2008 No comments:
Labels: Hardware, Measurement Tools
External Memory using I2C Serial EEPROM
နဲနဲအစပျိုးပါဦးမယ်။ ကျွန်တော်တို့ Microcontroller program ရေးတဲ့အခါ memory သုံးရပါတယ်။ ၂ မျိုးသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ On-Chip နဲ့ External Memory ပါ။ On-Chip က MCU ထဲမှာ ပါပြီးတော့ External က အပြင်မှာသပ်သပ်ထပ်ထည့်တဲ့ Memory ပါ။ ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်တော့ Cache နဲ့ RAM သဘောပေါ့။ ကျွန်တော် ပြောမှာက External Memory အကြောင်းပါ။ သူ့မှာ application ပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးအစားတွေကွဲလေ့ရှိပါတယ်။ SD, EEPROM, Flash ဆိုပြီးရှိကြပါတယ်။ protocol (I2C, SPI, UART) တွေလည်းကွဲကြပါတယ်။ ခုဟာက I2C protocol ကိုသုံးပြီးတော့ ရေးရတဲ့ EEPROM အကြောင်းပါ။
သူ့မှာ operation ၂ မျိုးပဲပါပါတယ်။ Read နဲ့ Write ပေါ့။ အောက်မှာ Read/ Write operation တွေရဲ့ Data Frame ပုံစံတွေပြထားပါတယ်။ I2C protocol အကြောင်းကိုတော့ ထပ်ပြောပါဦးမယ်။
Posted by ကိုမိုး at Wednesday, July 16, 2008 No comments:
Labels: Hardware, I2C, Microcontroller, Software
Operate Speed Mode Servo Motor using PWM
PWM အကြောင်းကို ကျွန်တော်ရေးနေတာများပါပြီ ဘယ်နေရာတွေမှာ ဘယ်လိုသုံးလည်း ဆိုတာကို ဆက်ရေးပါမယ်။ ကျွန်တော်သုံးဘူးတဲ့ နေရာတွေပေါ့။ ပထမတစ်ခုက Servo Motor (Direction Mode) မှာပါ။ Motor ရဲ့ Revolution မှာ လိုအပ်တဲ့ Pulse တွေပေးနိုင်အောင် သုံးပါတယ်။ Pulse တွေက အသေပေးထားလို့ မရ (Speed ကိုပြောင်းပြီး သုံးချင်တဲ့အတွက်) တဲ့အတွက် PWM ကိုသုံးရတာပါ။ Forward/ Backward (Directions) ပေးတာကတော့ Digital I/ O ကို low/ high လုပ်ပြီး သုံးလို့ရပါတယ်။
Labels: Hardware, Microcontroller, Modulation, Programming, Rabbit MCU
Bittorrent protocol with Free Download Manager
RSJ က Cbox မှာရေးသွားလို့ တစ်ခုသတိရ သွားတယ်။ Torrent နဲ့ပါတ်သတ်လို့ ဆက်ရေးစရာ နည်းနည်းရှိလို့ပါ။ Bittorrent ဆိုတဲ့ Software ကိုသုံးလို့ရတယ်လို့ အရင်ပို့စ်မှာ ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပါတယ်။ Bittorrent က Bandwidth တွေကို ရနိုင်သမျှဆွဲပြီး သူ့ Software မှာသုံးတဲ့အတွက် တစ်ခါတစ်လေမှာ Whole Network (LAN) ကြီး breakdown ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အကောင်းဆုံးနည်းက Free Download Manager ကိုသုံးပြီး bittorrent protocol ကို ပြန်သုံးပါ။ FDM ကို Install လုပ်တဲ့အခါမှာ bittorrent protocol ကိုသုံးမလားဆိုတဲ့ Checkbox လေးပါပါတယ်။ အဲဒါကို checked လုပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ သူ့ကိုသုံးမည့် bandwidth ကိုလည်း သတ်မှတ်ပေးထားလို့ရတော့ LAN ကြီး breakdown မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ ပုံမှန် speed (စင်ကာပူ ရဲ့ Internet Speed နဲ့ဆို) 600 MB လောက်ကို တစ်ရက်ခွဲလောက်ပဲ ကြာပါတယ်။ Health ကောင်းတဲ့ torrent ဆိုရင်ပေါ့။ Health ဆိုတာ Seeder နဲ့ Leecher ရဲ့ ratio ပါ။ Leecher က ဆွဲတဲ့သူဖြစ်ပြီး၊ Seeder က တင်တဲ့သူတွေပါ။ torrent တွေကို နှောက်ယှက်တဲ့ Tracker ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်။ တွေဝင်လာရင် torrent တွေ download လုပ်နေရင်းနဲ့ ပြတ်ကျသွားတတ်ပါတယ်။ အဲလိုဆိုရင် နောက် torrent တစ်ခုထပ်ရှာပြီး ဆွဲရပါတယ်။
Download Free Download Manager :
Posted by ကိုမိုး at Friday, July 11, 2008 No comments:
Pulse Width Modulation (PWM) over Analog Communication
Pulse Width Modulation ထုတ်တယ်ဆိုတာ Digital Circuit ကနေ Analog Signal တွေထုတ်ချင်တဲ့အခါ သုံးပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် Modulation ပေါ့ဗျာ။ Frequency Division Modulation (FDM) လို့လည်းခေါ်ကြတယ်။ သူရဲ့ processing ကနဲနဲတော့ရှုပ်တယ်။ အဓိကက timing နဲ့ noise ပါ။ ဥပမာလေးနဲ့ပြောတာပေါ့။
ဥပမာ ။ ။ A ကိုပို့ချင်တယ်ဆိုကြပါဆို့ ASCII အနေနဲ့ဆိုရင် 65၊ Hexa နဲ့ဆိုရင် 41။ သူ့ကို ပုံမှန် serial communication (UART) နဲ့ပို့မယ်ဆိုရင် Start bit, Data, Stop bit ဆိုတဲ့ protocol နဲ့ ရိုးရိုးတန်းတန်းပို့ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း Low/ High နဲ့ပေါ့။ Binary digit ဆိုရင် 1000001 ပေါ့။ အဲဒီနေရာမှာ Frequency နဲ့ကျတော့ Low = 2400 Hz, High = 3000 Hz ထားတယ်ဆိုပါစို့။ Low တွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ 24 KHz ကိုလွှတ်ပြီးတော့ High တွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ 30 Kz ကိုလွှတ်တယ်။ ၁၀ ဆ လွှတ်ရတာကတော့ Resolution အတွက်ပါ။ အဆများလေလေ Resolution ပိုကောင်းလေပေါ့။ timing က 5ms ဆိုရင် 1 bit ကို 5ms ထားပြီးလွှတ်ရတာပေါ့။ ပြန်ဖမ်းတဲ့အခါမှာလည်း အဲဒီ protocol အတိုင်းဖမ်းရပါတယ်။
တကယ်တော့ FM Radio တွေလည်း အဲလိုပဲ လွှင့်လေ့ရှိပါတယ်။ Frequency မြင့်လေ timing နဲ့ filtering လုပ်ရတာတွေ ခက်လာလေပါပဲ။ နောက်ထပ်အရေးကြီးတာက Noise ပါ။
Posted by ကိုမိုး at Wednesday, July 09, 2008 No comments:
Labels: DSP, Microcontroller, Modulation, Programming
Pulse Width Modulation (PWM) over Analog Communica...